စစ်ကောင်စီက အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်ပြော - ข่าวสด
စစ်ကောင်စီက အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိ...
20 ก.ย. 2564 - 20:15 น.
စစ်ကောင်စီရဲ့ တိုင်းနဲပြည်နယ်အလိုက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးခွဲတမ်းတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီး အခု ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေထဲကနေ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ က ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ဆေး ဆိုင်နိုဖန်းတွေကို အခု စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကစလို့ ဒုတိယအသုတ်အဖြစ် ထိုးပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ပြောခွင့်ရ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
အခုဒုတိယအသုတ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၂ သိန်း ၃ သောင်းခွဲတမ်းရရှိပြီး ဆေးထိုးပိုင်ခွင့် ရရှိတဲ့လူအုပ်စု ၁၆ အုပ်စုကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ ထိုးပေးသွားမှာဖြစ်သလို့ အဲ့ဒီဦးစားပေးအုပ်စု ၁၆ခုမှာ မသန်စွမ်းသူတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း EAO တွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း EAO အနေနဲ့ အေအေတစ်ဖွဲ့တည်းသာရှိနေပြီး လက်ရှိဆေးထိုးပေးမယ့် ဦးစာပေးလူအုပ်စုတွေထဲမှာ EAO ကိုထည့်သွင်း ထားတာကြောင့် အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
"ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုထိုးမယ်ဆိုတာကို ပြည်ထောင်စုက ဆက်ညွှန်ကြားဖို့ရှိပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ ထိုးနေတဲ့အထဲမှာတော့ခါ အေအေကိုထိုးနေတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ ထိုးမဲ့စာရင်းထဲမှာ ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ EAO အနေနဲ့"လို့ ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးရှောင် ငါးသောင်းခန့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရမယ်
ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွေအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေအပြင်း အထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကာ လတ်တလောမှာတော့ နှစ်ဖက်တပ်တွေအနေနဲ့ ယာယီ အပစ်ခတ်ရပ်စဲ ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်အစိုးရအနေနဲ့ အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးပေးသွားမယ်လို့ ပြောဆိုနေပေမဲ့ အေအေဘက်ကတော့ ဘယ်လိုသဘောထားတွေရှိမလဲဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရရှိတဲ့ ကာကွယ်ဆေးဒုတိယ အသုတ်ဦးစားပေးထိုးပေးသွားမယ့် လူအုပ်စု ၁၆ ခုထဲမှာ အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းနဲ့ ပရဟိတဝန်ထမ်းများ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ သာသနာ့ဝန်ထမ်း၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်နဲ့ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကစက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ ဟိုတယ်၊တည်းခိုးခန်းနဲ့အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အကျဉ်းသားနဲ့အချုပ်သားများ၊ ပုဂ္ဂလိက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ EAO၊ ရွှေ့ပြောင်းလူအုပ်စုများနဲ့ယာယီစခန်းများ၊ နာတာရှည်ရောဂါခံစားနေရသူများ စတာတွေ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ကြိမ်ထိုးပေးခဲ့တုန်းက အသက် ၆၅ နှစ်အထက်ရှိသူတွေကို ထိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုအကြိမ်မှာတော့ အသက် ၅၅ နှစ်အထက်ရှိသူတွေကို ထိုးပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မသန်စွမ်းသူတွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေမှာ စာရင်းပေးသွင်းကြဖို့အတွက် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဌာနက စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် မသန်စွမ်းသူများအစည်းအရုံးကို အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထားတယ်လို့ မသန်စွမ်းသူများ အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်က ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ALP/ALA နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် ULA/AA တို့နှစ်ဖွဲ့ရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ALA မှာ အစိုးရနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့် EAO ထဲမှာမပါတဲ့အတွက် ဆေးထိုးခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ကောင်စီဘက် က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စစ်ကောင်စီက အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်ပြော